Bioography uye akanakisa mabhuku a Megan Maxwell | Zvazvino Zvinyorwa
Biography uye akanakisa mabhuku aMegan Maxwell
Alberto Makumbo | | Vanyori, Mabhuku, Romance novel
Kunyangwe uchishandisa zita rekunyepedzera, muSpanish Megan Maxwell anga achikunda moyo kwemakore nekutenda a fivha chick lit panguva yakakodzera sezvo iri muto. Tinozvinyudza mu Megan Maxwell biography uye akanakisa mabhuku kuti uwane nyaya dzemunyori akakosha uyu.
1 Nhoroondo yaMegan Maxwell
2 Akanakisa Megan Maxwell mabhuku
2.1 Ndibvunze chero chaunoda
2.2 Ndiri eric zimmerman
2.4 Basa rehupenyu hwangu
2.5 Ruva kune rimwe ruva
2.6 Pedza husiku neni
2.7 Zvinei newe?
2.8 Chido chakapihwa. Varwi Maxwell 1
Nhoroondo yaMegan Maxwell
Mufananidzo: Mamiriro ekunze
Ndiine amai Toledo uye baba vekuNorth America, Mª Carmen Rodríguez del Álamo Lázara (Núremberg, 1965) akatamira naamai vake kuMadrid paakanga aine makore mashoma. Mushure mekudzidziswa kuSpain, akatanga kushanda semunyori muhofisi yepamutemo, kunyangwe munyori wezveramangwana akasiya zvese pakarwara mwanakomana wake.
Nguva yakaoma iyo, zvirinani, yakamupa nguva yakakwana yekuita zvido zvekare kuti anga asina nguva yekutangazve, kunyora iriyo mota yaaizonyura munguva yake yekusarudzika. Nekudaro, achishaya rovedzo, akatanga tora makosi akasiyana siyana paIndaneti kunyora kwekugadzira kunatsiridza maitiro ako uye kutsanangura yako wega masitayera. Neraki, mumwe wevadzidzisi vandakadzidzisa navo aive zvakare mupepeti, saka mushure mekuverenga zvinyorwa zve Ndakakuudza akafunga kuiburitsa muna 2009. Haingori nyaya yacho chete kuti ibudirire, asi zvakare yaizopihwa iyo Wepasi Pese Mubayiro weRoman Novel Seseña.
Chinyorwa chekutanga chebhaibheri kubva kuna 35 enganonyorwa umo Megan Maxwell (zita rekunyepedzera iro rinowanzo kuve rakabatanidzwa kune mumwe munyori) akaongorora murume kana mukadzi chick lit uye kudanana komedhi yekukurumbira kukuru mukati memakore gumi aya, kunyanya pakati pevateereri vechikadzi vakawana mumanoveli akaita seNdibvunze zvaunoda imwe yechinyakare uye inosimudzira vhezheni kupfuura iyo yaimbovhuvhuta saga Makumi mashanu emvuri yegrey.
Munyori anozokunda avo vaverengi anofarira kuverenga kuri nyore asi kwakanyanya, kazhinji kunotsigirwa nemamiriro ezvinhu.
Unoda kuziva Mabhuku akanakisa aMegan Maxwell?
Akanakisa Megan Maxwell mabhuku
Yakatumirwa muna 2012, Bhuku raMaxwell rine mukurumbira rakafananidzwa kanopfuura kamwe chete kusvika makumi mashanu Shades yeGrey, kukunda vateereri vakaona iyi "yepedyo" vhezheni seinowedzera kukurudzira. Nyaya inotizivisa Eric zimmerman, muzvinabhizimusi anozivikanwa wechiGerman uyo mushure mekufa kwababa vake akatamira kuMadrid kunotungamira nhumwa dzekambani yeMüller kuSpain. Kushanya kuchachinja hupenyu hwako nekusingaperi sangana naJudith musikana akanaka uye akangwara uyo waachazobvuma kumitambo yakasiyana yebonde, kufungidzira uye maitiro. Hukama hwakaomarara sekutyisa huchave munjodzi apo vese protagonists vanotanga kuzivana zviri nani uye Eric anoedza kuvanza chakavanzika nerima chero zvodii.
Kubudirira kwe Ndibvunze chero chaunoda Zvaive zvekuti Maxwell akaburitsa zvimwe zvikamu zvitatu: Ndibvunze zvaunoda izvozvi uye nguva dzose (2013), Ndibvunze zvaunoda kana kundisiya (2013) uye Ndibvunze zvaunoda ndigokupa (2015).
Ndiri eric zimmerman
Yakagamuchirwa se spin-off kubva kuSaga Ndibvunze zvaunoda, Ndiri eric zimmerman inokukoka iwe kuti uone zvakasangana pabonde zvechirume zvinotungamira kubva kune yako wega-yekutengesa nyaya nzvimbo maonero. Nepo vaverengi vazhinji vakazviona zvichiodza moyo, vateveri venganonyorwa dzakasimudza Maxwell kuti ave nemukurumbira vachakwanisa kufarira iyi imwe nzira yakaburitswa muna2017 yakateverwa nechikamu chechipiri chakaburitswa kutanga kwegore rino.
Yakatumirwa muna 2013, Ndishamise imwe ye mabhuku akanakisa naMegan Maxwell. Iyo nyaya yakaberekwa kubva mukubudirira kwekubatanidza vaviri vakasiyana zvakasiyana protagonists asi nebonde seyakajairika poindi. Nhoroondo inotyisa inorondedzera kusangana pakati paBjörn, gweta rine mukurumbira rinokonzeresa kuzvipira asi anoda mitambo yakasiyana yebonde, naMelania, mutyairi wemauto eAmerica anongoita kunge ane maziso kumwanasikana waakatakura saamai vasina murume. Maviri makuru mavara ane maitiro avo anofungidzira seti yemasaraki uye anoratidzira zviitiko zvevanoda mabhuku eerotic.
Basa rehupenyu hwangu
Kunyangwe munyori uyu achizivikanwa nemabasa ake "risque", Basa rehupenyu hwangu Yakanga iri nzira kune yakasarudzika mhuri yekunyengera uye rudo nyaya. Inofungidzirwa seimwe ye Mabhuku akanakisa aMegan Maxwell, Iri bhuku rakaburitswa gore rino rinopa Sharon, mukadzi wechidiki ane baba muridzi wekambani yemutemo ine mukurumbira, kambani yaanotanga kudzidzisa mwanasikana wake. Asi rimwe zuva Sharon anowana marisiti ebhengi akasiyana uye mufananidzo weumwe musikana anozove hanzvadzi yake. Netiweki yemhuri iyo protagonist ichatara kuti vaiwane nekutanga rwendo maanosangana nemurume anozomuita kuti afungezve hupenyu hwake zvizere.
Ruva kune rimwe ruva
Yakabudiswa muna 2017, Ruva kune rimwe ruva inobata inorwadza nyaya yerudo. Iye protagonist, Zac Phillips, murume anodanana naSandra, mukadzi wechidiki ane bvudzi rakasvibirira uye kunyemwerera kupenya kwakamutora makore mazhinji apfuura, panguva iyoyo Sandra naamai vake vasati vapedza kutama kubva kuScotland Highlands kuenda kuguta reCarlisle pane chishuwo chevasekuru naambuya vavo. Zac haangofamba chete kuenda kuCarlisle kunotora Sandra, asi anosangana nenhoroondo yemhuri yekukakavara uye chigumbu zvinotsanangura chimiro chesimbi chemudiwa wake.
Pedza husiku neni
Iyo erotic genre, inonyanya kuzivikanwa mukati mebasa raMaxwell, inosanganisira nyaya senge inovairi yakaburitswa muna2016 ikashanduka ikaita imwe yake fanira. Kutevera mukumira kweNdibvunze zvaunoda, panguva ino mudzidzisi wekuBrazil wepamusoro, Dennis, iyo isingasvikike yemoyo inopedzisira yawira mukukwezva kwaLola, mukadzi wechidiki wechiSpanish waanosangana naye muLondon uye anotanga kumuramba kusiyana nevamwe vake vaimupfimba.
Ungada here kuverenga Pedza husiku neni?
Noelia Estela Rince Ponce mutambi anotsvakwa kuHollywood wechiSpanish anobva anodzokera kuSpain kunosimudzira firimu rake razvino. Zvisinei, panguva yekugara kwako munyika yedu inoponeswa kubva pakubiwa naJuan Morán, mudiwa wekare waakasangana naye kamwe muLas Vegas. Zvakavanzika zvekare zvichizobata nekukwezva kunonzwika kune vese protagonists. Yakabudiswa muna 2016, Zvinei newe? kumwe kubudirira kukuru kwemunyori.
Chido chakapihwa. Varwi Maxwell 1
Izvo ndezve nyaya yaLady Megan Phillips uye iyo Highlander Duncan Mc Rae, iyo Falcon. Iye mudiki uye akanaka murwi uyo ari pamusoro pehama mbiri diki. Ane hunhu hwakasimba hunomuita murwi wechokwadi anokwanisa pamwe naye wese murwi aimbojaira kutungamira mauto uye kukunda muhondo. Iyo saga evane maxwell varwi mune imwe yeunganidzwa dzakabudirira kwazvo dzaMegan Maxwell. Bhuku rake rekutanga Wish raakapihwa unogona kuritenga pano
Wakafungei nezve Megan Maxwell biography uye akanakisa mabhuku?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Romance novel » Biography uye akanakisa mabhuku aMegan Maxwell
Zvinyorwa zvevanhu vakaremara, hurema hwekudzidza kana matambudziko nekuverenga.
Nadal naJosep Pla Mipiro yaGuillermo Martínez naMarc Artigau